Al Jarx Wa tacdiil } cilmiga xadithka qeybtii 2aad – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Sifada laga rabo ruuxa wax jarxinayaama tacdiilinaya
Darajada Sifada Tusaale-Alfaadha Xukunka
1) In la isticmaalo alfaad ku tusaysa tawthiiq heerka ugu sareeya فلان إليه المنتهي في التثبيت، أو فلان أثبت الناس(Hebel ayaa ugu thiqaysan dadka, ama hebel ayay ku dhamaataa sugnaanshau)
2) In la isticmaalo alfaadh xoojinaysa oo ku sheegaysa thiqa inuu yahay ruuxan ثقة ثقة ـ أو ثقة ثبت(Waa thiqa thiqa ah. Ama waa thiqa suggan) Dadka martabadan lagu sifeeyo waa xujjo axaadiistoodu .
3) In la isticmaalo alfaadh aan lagu adkayn inuu yahay thiqa saas usii weyn ثقة، أو حُجَّة.(Waa thiqa ama Xujjo) Dadka martabadan lagu sifeeyo waa xujjo axaadiistoodu.
4) In la sheego inuu yahay ruuxan caadil laakiin laguuma cadayn xifdigiisa صدوق. أو مَحَله الصدق ، و لا بأس به(Haddii uu Yaxye ibnu Maciin yidhaah ”laa b’sa bih” waxuu kawadaa waa thiqqa)
5) inaan la cadeyn tawthiiq iyo tajriix midkoodna فلان شيخ، أو روي عنه الناس.(Hebel waa sheekh, ama hebel dadku way ka weriyaan) Martabada dadka lagu sifeeyo lama xujaysto axaadiistooda laakiin waa laga qori axaadiistooda waxaana loo isticmaali ikhtibaar ahaan. (Ikhtibaar waxaa aga wadaa =Axaadiistooda ayaa waxaa loo bandhigi dadka thuqaata ah axaadiista ay weriyaan, haddii ay is waafaqaan waa la qaadan haddii kalena lama qaadanayo).
6) Wax ku dareensiinaya inay u dhawdahay jarxin. فلان صالح الحديث، أو يُكْتَبُ حديثه.(Hebel waa saalixu xadith, ama hebel waa laga qoraa axaadiista)
1) Wax ku tusaya dabacsanaan. Waana kan ugu dhibyar jarxiga (yacni sifadan dadka lagu sheego mahan jarxi sidaa usii weyn). فلان لَيَّنُ الحديث،أو فلان فيه مَقال(Hebel wuu xadiith fududyahay, ama waxbaa laga sheegaa) Martabada dadka lagu sifeeyo lama xujaysto axaadiistooda ,laakiin waa laga qori ictibaar ahaan ayaa loo qaadan axaadiistooda.
2) In laguu cadeeyo qofkaas inaan la xujaysan. فلان لا يحتج به ، أو ضعيف ، أو له مناكير( Hebel lama xujaysto , ama waa dhaciif, ama waxuu leeyahay manaakiir) Martabada dadka lagu sifeeyo lama xujaysto axaadiistooda ,laakiin waa laga qori ictibaar ahaan ayaa loo qaadan axaadiistooda.
3) In laguu cadeeyo in qofkaas aan laga qorin axaadiis. فلان لا يكتب حديثه، أو لا تحل الراوية عنه أو ضعيف جداً( Hebel lagama qoro axaadiis, ama ma banaana in hebel laga weriyo, ama waa dhaciif daran) Martabadan dadka lagu sifeeyo lama xujaysto, lagamana qoro , lamana ictibaaro axaadiistooda.
4) In lagu tuhmo been . فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع، أو يسرق الحديث، أو متروك أو ليس بثقة.( Hebel been baan lagu tuhmayaa, ama wadhci baa lagu tuhmi, ama axaadiistuu xadaa, ama waa mid laga tago, ama thiqa mahan) Martabadan dadka lagu sifeeyo lama xujaysto, lagamana qoro , lamana ictibaaro axaadiistooda.
5) In lagu sifeeyo beenaale كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع(Waa beenaale, ama Dajjaal, ama wadhaac, ama wuxuu sheegaa been, ama wuu wadciyaa) Martabadan dadka lagu sifeeyo lama xujaysto, lagamana qoro , lamana ictibaaro axaadiistooda.
6) In lagu xeedheerado beenaale-nimadiisa. فلان أكذب الناس ، أو إليه المنتهي في الكذب ، أو هو ركن الكذب .(Hebel waa kan dadka ogu been badan, ama isagay ku dhamaataa beentu,ama waa tiirka beenta.) Martabadan dadka lagu sifeeyo lama xujaysto, lagamana qoro , lamana ictibaaro axaadiistooda.
2 thoughts on “Al Jarx Wa tacdiil } cilmiga xadithka qeybtii 2aad”
Sooma wanaagsana inaad qortid meeshaad kasoo xigatay walaal
Wcs walal , wey wanagsantahay in la xuso meshan kaso xigtay waana sameyn doona insha allah adna waad ku mahadsantahay xasuusintaada